अब पहिले जस्तो सोलोडोलो लकडाउन नहुने, फेरियो मोडालिटी ! – Sandesh Munch
June 23, 2020 310
Prevछोराको मृत्युको खबर सुनेपछि शस्त्र त्याग गरी रणभुमिमा शोकमा डुबेको अवस्थामा द्रौपदीका भाई धृष्टद्युम्नले निर्दोष द्रोणाचार्यको टाउको काटिदिएका थिए ।
Nextदक्षिण कोरियाले अहिले आफ्नो देशमा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्राे लहर सुरु भएको बताएको छ ।
सप्तरीमा कोरोना संक्रमित युवकको गाउँ सिल
जति माँझ्दा पनि दाँत पहेँलो देखिन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् ५ मिनेटमै सेतो हुन्छ